USB Drives बाट virus delete गर्नुहोस्।
आजको युगमा USB को प्रयोग नगर्ने मनिसहरु कम नै होलान। USB को प्रयोग सँगै हामीले USB बाट कम्प्युटरमा पर्ने असर बारे पनि बुझनू जरुरी छ। USB भनेको यस्तो device हो जसको मद्धत कुनै पनि फाइल एउटा कम्प्युटर बाट अर्को कम्प्युटर मा transfer गर्न प्रयोग गरिन्छ। तर यसले तपाईंले चाहेको फाइल मात्र होइन बिभिन्न प्रकारको virus हरु पनि transfer गर्छ। जस्तै ’Ravmon’Folder.exe’ यस्तै यस्तै। यसकारण आज म तपाईंहरुलाई USB बाट virus delete गर्ने बारे बताउन गैरहेको छु।
जहिले पनि तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरको USB pot मा USB राखे पछी तलको जस्तै देखाउछ। त्यसलाई cancel क्लिक गर्नुहोस्।
त्यस पछी start menu मा जानुहोस् र run टाईप गरी run cammnd खोल्नुहोस् र cmd टाईप गर्नुहोस्। त्यस पछी cammand prompt खुल्छ त्यहाँ drive letter: टाईप गरी enter हान्नुहोस। अब dir/w/a टाईप गरी enter हान्नुहोस। यसले तपाईंको USB भित्र रहेको फाइहरु देखाउछ। तलको फाइलहरु त्यहाँ छ कि छैन चेक गर्नुहोस।
*अरु कुनै exe फाइल जुन suspend खालको
यदी यि मध्य कुन्नै पनि फाइल तपाईंको USB मा छ भने तपाईंको USB मा virus छ।
अब camaand promot मा attrib -r -a -s -h*.* टाईप गरी enter हान्नुहोस। अब del filename. प्रयोग गरेर सबै माथि देखएका फाइलहरु delete गरिदिनुहोस्। जस्तै(del Ravmon.exe.)
अब तपाईंको USB drive लाई antivirus ले scan गर्नुहोस् सबै virus delete भयो कि भएन हेर्नुहोस्।यदी अझै virus देखाउछ भन्ने माथिको मध्य फाइल छानेर पुन: delete गरिद्नुहोस्।
अब USB निकलिदिनुहोस् र फेरी USB pot मा पुन: राख्नुहोस्। र scan गर्नुहोस् अब तपाईंको USB मा virus हुनेछैन।
(यो ट्रिक प्रयोग गरेपछी कमेन्ट गर्न चाँही नभुल्नुहोला नि)
लेखक: दिपक भट्टराई बाट 5:10 PM